ကိုယ်ဝန်လမစေ့ဘဲမွေးဖွားရခြင်းရဲ့အကြောင်းအရင်းများနှင့်လက္ခဏာများ၊ ဘယ်လိုကာကွယ်ကြမလဲ? | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
>> လမစေ့ဘဲမွေးတယ်ဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်မတိုင်မီမှာ သားအိမ်ကြုံ့ပြီး သားအိမ်ခေါင်းအဝကျယ်လာကာ မွေးဖွားခြင်းကို လမစေ့ဘဲ မွေးတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ အချိန်အပေါ်မူတည်ပြီး အမျိုးအစားတွေခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
• ကိုယ်ဝန် ၂၈ ပတ်မတိုင်မီ - အလွန်အမင်းလမစေ့
• ၂၈ ပတ် - ၃၂ ပတ် - အလွန်လမစေ့
• ၃၂ ပတ် - ၃၇ ပတ် - အတန်အသင့်လမစေ့
1. အလိုအလျောက်လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်း - ဒါကတော့ ဘာမှကြိုတင်စီစဉ်မှုမရှိဘဲနဲ့ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်မတိုင်မီ ကလေးမွေးသွားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းမှန်ကိုမသိရပေမယ့် ရောဂါပိုးဝင်ခြင်း (သို့) ရောင်ရမ်းခြင်းတွေက ဒါကိုအားပေးပါတယ်။
2. ကျန်းမာရေးအခြေအနေအရလိုအပ်သောကြောင့် လမစေ့ဘဲမွေးရခြင်း - ကိုယ်ဝန်ဆိပ်တက်ခြင်းကဲ့သို့သော အခြေအနေမျိုးမှာ ဆရာဝန်က ဆေးသွင်းပြီး ကိုယ်ဝန်စောစောမွေးစေဖို့ ညွှန်ကြားပါတယ်။ သို့သော်လည်း ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ ကိုယ်ဝန်ကို လမစေ့ဘဲမမွေးစေဖို့ တတ်နိုင်သမျှ အချိန်ဆွဲပြီး အခြားကုထုံးတွေနဲ့ထိန်းထားလေ့ရှိပါတယ်။ ဒီလိုအချိန်မှာတော့ မိခင်ရော ကလေးကိုပါ အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုထားဖို့လိုပါတယ်။ တကယ်လို့ ကိုယ်ဝန်ကိုဆက်ထိန်းထားလို့မရတော့ဘူး မွေးဖို့လိုအပ်လာပြီဆိုရင်တော့ ကလေးရဲ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါတွေရင့်သန်ဖို့အတွက် Steroid ဆေးထိုးပေးပြီးမှ မွေးဖွားပေးပါတယ်။
3. ကျန်းမာရေးအခြေအနေကြောင့်မဟုတ်ဘဲ လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်း - ဒါကတော့ အရေးပေါ်အခြေအနေမဟုတ်ဘဲနဲ့ ဆေးသွင်းပြီးမွေးဖွားခြင်း (သို့) ခွဲမွေးခြင်းကိုပြောတာပါ။ ဒီလိုမျိုးလမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းမျိုးက ပြုလုပ်ဖို့ညွှန်ကြားထားခြင်းမရှိပါဘူး။ လေ့လာမှုတွေအရ ကိုယ်ဝန် ၃၇ ပတ်-၃၈ ပတ်ကြားမှာ ဆေးသွင်းပြီးမွေးဖွားထားတဲ့ကလေးတွေက ၃၉ ပတ်နောက်မှမွေးတဲ့ လစေ့တဲ့ကလေးတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူးလို့တွေ့ရှိရပါတယ်။
လမစေ့ဘဲမွေးဖွားခြင်းက အချိန်မရွေးဖြစ်လာနိုင်ပြီး ပြင်ဆင်ဖို့အချိန်ရချင်မှရပါလိမ့်မယ်။ လစေ့ဘဲမွေးနိုင်ချေတွေကို သိထားဖို့လိုပါတယ်။
>> ဘယ်သူတွေမှာ လမစေ့ဘဲမွေးနိုင်ချေများသလဲ?
အောက်ပါအချက်များမှ တစ်ချက် (သို့) တစ်ချက်ထက်ပိုပြီး ကိုက်ညီမှုရှိပါက လမစေ့ဘဲမွေးဖွားနိုင်ချေများပါတယ်။
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်မတိုင်မီက အဝလွန်ခြင်း (သို့) ပိန်လွန်းခြင်း
• ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် အရက်သောက်ခြင်း၊ ဆေးလိပ်သောက်ခြင်း၊ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲခြင်း
• ဆီးချို၊ သွေးတိုး စသည်တို့ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်း၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ်သွေးတိုးခြင်း၊ (သို့) သိုင်းရွိုက်ကဲ့သို့သော ရောဂါများမိခင်တွင်ရှိခြင်း
• ကလေးတွင် မွေးရာပါချို့ယွင်းချက်အချို့ရှိခြင်း
• ခန္ဓာကိုယ်ပြင်ပတွင် သန္ဓေအောင်ထားသောကိုယ်ဝန်များ
• ၂ မွှာနှင့်အထက်ကိုယ်ဝန်များ
• ရေမွှာရေ များလွန်းခြင်း (သို့) နည်းခြင်း
• မွေးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ မိန်းမကိုယ်လမ်းကြောင်းနှင့်မဆိုင်သောပိုးဝင်ခြင်းများ (ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်း၊ အဆုတ်ရောင်ရောဂါ၊ အူအတက်ရောင်ခြင်း)
• ဆီးလမ်းကြောင်းပိုးဝင်ခြင်းနှင့် လိင်မှတစ်ဆင့်ကူးစက်တတ်သောရောဂါများ
• အရင်က ခွဲမွေးဖူးသောကိုယ်ဝန်များတွင် သားအိမ်ကွဲထွက်သွားခြင်း
• မျိုးပွားခြင်းနှင့်ဆိုင်သောအင်္ဂါများပုံမမှန်ခြင်း ( သားအိမ်ခေါင်းတိုခြင်း သို့ ကိုယ်ဝန်မွေးခါနီး ၃ လတွင်မှ သားအိမ်ခေါင်းတိုရမယ့်အစား ဒုတိယသုံးလပတ်ကတည်းက သားအိမ်ခေါင်းတိုလာခြင်း)
• အရင်က လမစေ့ဘဲမွေးဖူးခြင်း
• နောက်ဆုံးကိုယ်ဝန်ပြီးနောက် ၆ လအတွင်းကိုယ်ဝန်ထပ်ရခြင်း
• အသက် ၁၈ နှစ်အောက်နှင့် ၃၅ နှစ်အထက်အမျိုးသမီးများ
• နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအချက်များ
• အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုများ၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုများနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထောက်ပံ့မှုမရှိခြင်း
ဒီအချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီမှုများလေလေ လမစေ့ဘဲမွေးဖွားနိုင်ချေများလေဖြစ်ကာ ဒါဟာ ကလေးအတွက်မကောင်းပါဘူး။
လမစေ့ဘဲမွေးဖွားနိုင်မယ့်လက္ခဏာတွေကိုစောစောသိပြီး ပြသနာတွေကိုအချိန်မီဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့မယ်ဆိုရင် အထက်ပါနောက်ဆက်တွဲဆိုးကျိုးတွေဖြစ်နိုင်ချေကို လျော့ကျစေနိုင်ပါတယ်။
• မိန်းမကိုယ်မှဆင်းသောအရည်များပြောင်းလဲခြင်း (အရည်၊ အချွဲ (သို့) သွေးဆင်းခြင်း)
• မိန်းမကိုယ်မှသွေးဆင်းခြင်း (သို့) သွေးနည်းနည်းဆီထွက်ခြင်း
• ဝမ်းလျှောသည်ဖြစ်စေ၊ မလျှောဘဲဖြစ်စေ ဗိုက်ရစ်ပြီးနာခြင်း
• သားအိမ်နေရာတွင် တစ်ခုခုဖိထားသလိုခံစားရခြင်း
• ဗိုက်မနာဘဲ သားအိမ်မကြာခဏကြုံ့ခြင်း
သွေးဆင်းခြင်းကဲ့သို့သောလက္ခဏာတွေက ကိုယ်ဝန်ဆောင်တစ်လျှောက်လုံးကြုံလာရတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် လမစေ့ဘဲမွေးချင်လို့ သွေးဆင်းတာက ရေဆင်းခြင်း (သို့) ဗိုက်နာခြင်းတွေနဲ့အတူ ပန်းရောင် (သို့) သွေးရဲရဲတွေဆင်းလာနိုင်ပါတယ်။
>> လမစဘေဲ့မှေးတယျဆိုတာ ဘာလဲ
ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျမတိုငျမီမှာ သားအိမျကွုံ့ပွီး သားအိမျခေါငျးအဝကယျြလာကာ မှေးဖှားခွငျးကို လမစဘေဲ့ မှေးတယျလို့ချေါပါတယျ။ အခြိနျအပျေါမူတညျပွီး အမြိုးအစားတှခှေဲခွားနိုငျပါတယျ။
• ကိုယျဝနျ ၂၈ ပတျမတိုငျမီ - အလှနျအမငျးလမစေ့
• ၂၈ ပတျ - ၃၂ ပတျ - အလှနျလမစေ့
• ၃၂ ပတျ - ၃၇ ပတျ - အတနျအသငျ့လမစေ့
1. အလိုအလြောကျလမစဘေဲ့မှေးဖှားခွငျး - ဒါကတော့ ဘာမှကွိုတငျစီစဉျမှုမရှိဘဲနဲ့ ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျမတိုငျမီ ကလေးမှေးသှားခွငျးဖွဈပါတယျ။ ဒီလိုဖွဈရတဲ့ အကွောငျးအရငျးမှနျကိုမသိရပမေယျ့ ရောဂါပိုးဝငျခွငျး (သို့) ရောငျရမျးခွငျးတှကေ ဒါကိုအားပေးပါတယျ။
2. ကနျြးမာရေးအခွအေနအေရလိုအပျသောကွောငျ့ လမစဘေဲ့မှေးရခွငျး - ကိုယျဝနျဆိပျတကျခွငျးကဲ့သို့သော အခွအေနမြေိုးမှာ ဆရာဝနျက ဆေးသှငျးပွီး ကိုယျဝနျစောစောမှေးစဖေို့ ညှနျကွားပါတယျ။ သို့သျောလညျး ဖွဈနိုငျရငျတော့ ကိုယျဝနျကို လမစဘေဲ့မမှေးစဖေို့ တတျနိုငျသမြှ အခြိနျဆှဲပွီး အခွားကုထုံးတှနေဲ့ထိနျးထားလရှေိ့ပါတယျ။ ဒီလိုအခြိနျမှာတော့ မိခငျရော ကလေးကိုပါ အနီးကပျစောငျ့ကွပျကွညျ့ရှုထားဖို့လိုပါတယျ။ တကယျလို့ ကိုယျဝနျကိုဆကျထိနျးထားလို့မရတော့ဘူး မှေးဖို့လိုအပျလာပွီဆိုရငျတော့ ကလေးရဲ့ကိုယျတှငျးအင်ျဂါတှရေငျ့သနျဖို့အတှကျ Steroid ဆေးထိုးပေးပွီးမှ မှေးဖှားပေးပါတယျ။
3. ကနျြးမာရေးအခွအေနကွေောငျ့မဟုတျဘဲ လမစဘေဲ့မှေးဖှားခွငျး - ဒါကတော့ အရေးပျေါအခွအေနမေဟုတျဘဲနဲ့ ဆေးသှငျးပွီးမှေးဖှားခွငျး (သို့) ခှဲမှေးခွငျးကိုပွောတာပါ။ ဒီလိုမြိုးလမစဘေဲ့မှေးဖှားခွငျးမြိုးက ပွုလုပျဖို့ညှနျကွားထားခွငျးမရှိပါဘူး။ လလေ့ာမှုတှအေရ ကိုယျဝနျ ၃၇ ပတျ-၃၈ ပတျကွားမှာ ဆေးသှငျးပွီးမှေးဖှားထားတဲ့ကလေးတှကေ ၃၉ ပတျနောကျမှမှေးတဲ့ လစတေဲ့ကလေးတှနေဲ့ယှဉျရငျ ကနျြးမာရေးမကောငျးဘူးလို့တှရှေိ့ရပါတယျ။
လမစဘေဲ့မှေးဖှားခွငျးက အခြိနျမရှေးဖွဈလာနိုငျပွီး ပွငျဆငျဖို့အခြိနျရခငျြမှရပါလိမျ့မယျ။ လစဘေဲ့မှေးနိုငျခတြှေကေို သိထားဖို့လိုပါတယျ။
>> ဘယျသူတှမှော လမစဘေဲ့မှေးနိုငျခမြေားသလဲ?
အောကျပါအခကျြမြားမှ တဈခကျြ (သို့) တဈခကျြထကျပိုပွီး ကိုကျညီမှုရှိပါက လမစဘေဲ့မှေးဖှားနိုငျခမြေားပါတယျ။
• ကိုယျဝနျဆောငျမတိုငျမီက အဝလှနျခွငျး (သို့) ပိနျလှနျးခွငျး
• ကိုယျဝနျဆောငျစဉျ အရကျသောကျခွငျး၊ ဆေးလိပျသောကျခွငျး၊ မူးယဈဆေးသုံးစှဲခွငျး
• ဆီးခြို၊ သှေးတိုး စသညျတို့ကိုမထိနျးခြုပျနိုငျခွငျး၊ ကိုယျဝနျဆောငျစဉျသှေးတိုးခွငျး၊ (သို့) သိုငျးရှိုကျကဲ့သို့သော ရောဂါမြားမိခငျတှငျရှိခွငျး
• ကလေးတှငျ မှေးရာပါခြို့ယှငျးခကျြအခြို့ရှိခွငျး
• ခန်ဓာကိုယျပွငျပတှငျ သန်ဓအေောငျထားသောကိုယျဝနျမြား
• ၂ မှာနှငျ့အထကျကိုယျဝနျမြား
• ရမှောရေ မြားလှနျးခွငျး (သို့) နညျးခွငျး
• မှေးလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျး၊ မိနျးမကိုယျလမျးကွောငျးနှငျ့မဆိုငျသောပိုးဝငျခွငျးမြား (ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျး၊ အဆုတျရောငျရောဂါ၊ အူအတကျရောငျခွငျး)
• ဆီးလမျးကွောငျးပိုးဝငျခွငျးနှငျ့ လိငျမှတဈဆငျ့ကူးစကျတတျသောရောဂါမြား
• အရငျက ခှဲမှေးဖူးသောကိုယျဝနျမြားတှငျ သားအိမျကှဲထှကျသှားခွငျး
• မြိုးပှားခွငျးနှငျ့ဆိုငျသောအင်ျဂါမြားပုံမမှနျခွငျး ( သားအိမျခေါငျးတိုခွငျး သို့ ကိုယျဝနျမှေးခါနီး ၃ လတှငျမှ သားအိမျခေါငျးတိုရမယျ့အစား ဒုတိယသုံးလပတျကတညျးက သားအိမျခေါငျးတိုလာခွငျး)
• အရငျက လမစဘေဲ့မှေးဖူးခွငျး
• နောကျဆုံးကိုယျဝနျပွီးနောကျ ၆ လအတှငျးကိုယျဝနျထပျရခွငျး
• အသကျ ၁၈ နှဈအောကျနှငျ့ ၃၅ နှဈအထကျအမြိုးသမီးမြား
• နထေိုငျမှုနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြဆိုငျရာအခကျြမြား
• အိမျတှငျးအကွမျးဖကျမှုမြား၊ လိငျပိုငျးဆိုငျရာ၊ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာ၊ စိတျပိုငျးဆိုငျရာအကွမျးဖကျမှုမြားနှငျ့ ပတျဝနျးကငျြထောကျပံ့မှုမရှိခွငျး
ဒီအခကျြတှနေဲ့ကိုကျညီမှုမြားလလေေ လမစဘေဲ့မှေးဖှားနိုငျခမြေားလဖွေဈကာ ဒါဟာ ကလေးအတှကျမကောငျးပါဘူး။
လမစဘေဲ့မှေးဖှားနိုငျမယျ့လက်ခဏာတှကေိုစောစောသိပွီး ပွသနာတှကေိုအခြိနျမီဖျောထုတျနိုငျခဲ့မယျဆိုရငျ အထကျပါနောကျဆကျတှဲဆိုးကြိုးတှဖွေဈနိုငျခကြေို လြော့ကစြနေိုငျပါတယျ။
• မိနျးမကိုယျမှဆငျးသောအရညျမြားပွောငျးလဲခွငျး (အရညျ၊ အခြှဲ (သို့) သှေးဆငျးခွငျး)
• မိနျးမကိုယျမှသှေးဆငျးခွငျး (သို့) သှေးနညျးနညျးဆီထှကျခွငျး
• ဝမျးလြှောသညျဖွဈစေ၊ မလြှောဘဲဖွဈစေ ဗိုကျရဈပွီးနာခွငျး
• သားအိမျနရောတှငျ တဈခုခုဖိထားသလိုခံစားရခွငျး
• ဗိုကျမနာဘဲ သားအိမျမကွာခဏကွုံ့ခွငျး
သှေးဆငျးခွငျးကဲ့သို့သောလက်ခဏာတှကေ ကိုယျဝနျဆောငျတဈလြှောကျလုံးကွုံလာရတဲ့လက်ခဏာနဲ့တူနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ လမစဘေဲ့မှေးခငျြလို့ သှေးဆငျးတာက ရဆေငျးခွငျး (သို့) ဗိုကျနာခွငျးတှနေဲ့အတူ ပနျးရောငျ (သို့) သှေးရဲရဲတှဆေငျးလာနိုငျပါတယျ။